အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 2007
You took my proverties..
You saw my money.....
You brake your fate....!!
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:36 PM2comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:38 PM2comments:
Brake the fate.....!!
Lock the pain and
Shake the aims...!!
Kick the stress and
Kiss the checks.....!!
Feel the sky.........!!
Fire the fear and
Born the stars.....!!
I want to play..........!!
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:14 PM No comments:
Veering into Paranoia
Who should I care
If my sensitivity veering me into "Paranoia"....??
I dun asked nobody to stand beside me..
please...don't give any shit to me...
Don't ask me what is the meaning of life...
I will not answer you as I don't have any life...
I don't need anyone to salvage me...!!
I hate you.....!!
I will not care you hate me or not...!!
I challenge you Mr. Fate...!!
I dun care how you can make me hurt or
How you can make my dreams up side down....!!
Maybe I am hanging my head down ...
It's not coz i afraid you...
I am just thinking how I can make your knees down...!!!
Let me say one thing at last...
" I will never surrender" to you..&
Posted by Pyiet Oo Aung at 10:51 PM3comments:
Labels: English Poems, Personal
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:46 AM No comments:
ငါပြောချင်တယ် ဒါပေမယ့် မင်းနားမလည်မှာဆိုးတယ်
အသိဥာဏ် ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ လူသားတွေဟာ
သက်မဲ့တွေရဲ့ လှည့်စားမှုကို ခံနေရတာပါ....။
စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေးရာကို ပြေးကြမယ်
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:40 PM 1 comment:
Damn!! I Miss That Place and Those Days So Much..
Posted by Pyiet Oo Aung at 12:15 AM 1 comment:
ဒီအချိန်မှာ ငါဘာကိုမှ ပြန်တမ်းတနေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး.....။
"Hysteria" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုမှ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံး စကားတစ်လုံး
"၈" ပါးထဲရှိတဲ့ လောကဓံကို ရင်ဆိုင်ဖို့
ဘ၀တစ်ခုလုံး ထိုးအပ်စရာ မလိုပါဖူး....
"သတိပဌာန်" ဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးကို
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:47 PM No comments:
ဘာဖြစ်လို့ သူများကိုမှ လက်ညှိုးထိုးခြင်ရတာလဲ?
စစ်မှန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုတော့ ရလာမှာ မဟုတ်ဘူး....။
လူတိုင်းမှာ "အကောင်း" နဲ့ "အဆိုး"
ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ငါးချဉ်မှ ကိုယ်ချဉ်ခြင်နေကြရတာလဲ...?
ဘယ်တော့မှ မရရှိကျပါစေနဲ့....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 12:19 PM2comments:
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းတစ်ခု ပြန်မေးကြည့်တယ်
ဘာလို့ ငါ့ဝိဥာဉ်ကို ငါမမြင်ရတာလဲ...?
ဘာလို့ ငါ့ရပ်တည်မှုကေ၀၀ါးနေရတာလဲ???
ငါ့ကိုယ်ငါ သတ်သေခွင့်ပေးပါ......။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:29 AM 1 comment:
ည...........အလွမ်း...အတိတ်........Cegratte..............လမ်းပျောက်ခြင်း........Illusion.....ခံစားချက်........ ဆူညံသံ............အိမ်...........မျှော်လင့်ချက်...အရောင်လွင့်ခြင်း.............အထင်လွဲမှု.........ဝေဒနာ......... ..............မရေရာခြင်း......နားလည်မှု.............သူရဲကောင်း.....Sex.....အမှောင်........မောဟ...အိပ်မက်.. Stress.......ချစ်သူ.....YYN......ကျရှုံးမှု.........ကဗျာ........Whiskey.......အမှန်တရား.....နောင်တ.......... Coffee....... ဂုဏ်ဒြပ်...အချိန်.............ဂစ်တာတစ်လက်.........လူ့အခွင့်အရေး........Black T-Shirt....... ........အောင်မြင်မှု...........Drug.........သေခြင်းတရား......အလွဲသုံးစားမှု........."မင်းင့ါကို လိမ်တယ်"......နားလည်ပါးရိုက်ခြင်း.......... လမ်းဆုံ.......Choice???......နွား.......အဆိပ်.....Democracy....မနက်ဖြန် ..... .......တန်ပြန်သက်ရောက်မှု.......Hysteria........ စကားလုံး.....Revenge.. "ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ပါ".............နောက်ဆုံး.................မျက်ရည်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:50 AM4comments:
ဂရုစိုက်၊ အချိန်ပေးနိုင်မှု.................. ၉၅%(ဂုဏ်ထူး)
အမှတ်ပေါင်း................................ ၄၀၇ မှတ်
မှတ်ချက်။ ။ ဤကျောင်းသားသည် "မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ရာသက်ပန်လက်တွဲဖော် ၀င်ခွင့်" တွင် (၄) ဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ထူးချွန်စွာကျရှုံးသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်။ ။ အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာ ရာသက်ပန်လက်တွဲဖော် ၀င်ခွင့် စစ်ဆေးရေးကော်မတီ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:21 AM6comments:
Labels: Essay, Poems
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:59 AM 1 comment:
OASIS တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ် ထင်တာ..
တကယ်တော့ငါ တွေ့ခဲ့တာက တံလျပ်တွေဘဲ....။
ငါ့ဦးနှောက်က ငါ့နှလုံးသားကို မေးနေပြီ....
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:07 PM3comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 10:19 PM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:31 PM3comments:
ငါ့အတွက် ကံကောင်းမှုတွေ ပေးလှည့်ပါအုံး.....။
အကြိမ်ကြိမ် သတ်ပုံမှားခဲ့သူပါ.....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:26 PM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:21 PM No comments:
မိုးရွာလို့ ရေတင်နေတဲ့ ရေအိုင်မဟုတ်ဘူး...
ငါ့ရဲ့ အညှိုးတွေ.........။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:35 PM3comments:
အိပ်မက် နှင့် ကဗျာ တရားစီရင်ခန်း
တရားသူကြီး : ကဲ မောင်အိပ်မက် မင်းက အရင်စပြော….။
အိပ်မက် : ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်(အိပ်မက်)တွေကို “ကဗျာ” ကခိုးသွားလို့ပါ….။
တရားသူကြီး : မင်းက သူခိုးသွားတယ်လို့ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်ရတာလဲ….. ?
အိပ်မက် : သူရဲ့ ကဗျာတိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ခံစားချက် (အိပ်မက်) တွေပါနေလို့ပါ…။
တရားသူကြီး : သူပြောတာ အမှန်ဘဲလားကွ…..?
ကဗျာ : မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ..သူသာကျွန်တော့ နာမည်(ကဗျာ)ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာပါ။
တရားသူကြီး : မင်းက ဘယ်လိုသက်သေပြနိုင်လို့လဲ……?
ကဗျာ : သူက သူ့အိပ်မက်တိုင်းကို ကျွန်တော့နာမည်(ကဗျာ)လို့တပ်ပြီး Post တွေတင်လို့ပါ။
ထွက်ဆိုချက်များကို သေချာစွာစစ်ဆေးနားထောင်ပြီးသောအခါ တရားသူကြီးသည် ခေါင်းကိုဖြေးညှင်း စွာငြိတ်ပြီး အောက်ပါ သမိုင်းဝင်ဆုံး ဖြတ်ချက်ကို ပြတ်သားစွာ ချမှတ်လိုက်လေသည်……..။
တရားသူကြီး :သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကိုယ်ဆီကိုယ်ငှ မှန်ကန်နေခြင်း၊ရာဇ၀တ်
မှုအား အတူတကွ ကျူးလွန်ခြင်းများကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရှိရခြင်း တို့ကြောင့် နောင်တွင်ထို
သို့သော မသင့်မြတ်မှုများ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်စေရန် အောက်ပါအမိန့်အားချမှတ်လိုက်သည်။
တရားသူကြီး : အမိန့်…။ ယနေ့မှစ၍ “ကဗျာ” နှင့် “အိပ်မက်” တို့သည် မိမိတို့၏ အပြစ်များကို
ကိုယ်စီပေးဆပ်သည့် အနေဖြင့်.."လူသားတို့၏ နှလုံးသားအား ကမ္ဘာဆုံးသည့် အချိန်
အထိ တစ်ယောက်တစ်ခြမ်းစီ ပင်ပန်းစွာ ထမ်းရွက်ထားစေ…..။"
စာရေးသူ။ ။ ကျွန်တော်လည်းသူတို့အမှုထဲ ပါမှာစိုးလို့ အခုတင်တဲ့ Post ကို ကဗျာ (သို့)အိပ်မက်
လို့ Lable မထိုးရဲတာနဲ့….. Eassy….လို့ဘဲ သုံးနှုန်းလိုက်ရပါကြောင်း…….
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:54 AM 1 comment:
ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ လူသတ်မှုတစ်ခုကို မျက်ဝါး ထင်ထင်မြင်တွေ့နေ ရသည်။ လူသတ်မှုဖြစ်သည့် နေရာတွင် လူတွေ ၀ိုင်အုံပြီးကြည့်နေကျသည်...။ လူတစ်ယောက်၏ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်းကို အပေါစား မျက်လှည့်ပွဲ တစ်ခုလိုဝိုင်းအုံပြီး ကြည့်နေကျသည်..။ ထင်ရာမြင်ရာ ဝေဖန်ချက်တွေပေးပြီး ကောလဟာလ အမျိုးမျိုး ထုတ်လွှင့်ဖို့ ကျိုးစားနေကျသည်...။
"နေပါဦး ဒီလူ့ကို ဘယ်သူသတ်သွားတာလဲ ? "
"ဒီလူ့ကို သတ်သွားတဲ့ လူနာမည်က "ဖောက်ပြန်သူ" ဆိုလားဘဲဗျ.."
ဒီစကားသံတွေကို ကျွန်တော်မကြားခြင်ပေမယ့်.....ကြားဖြစ်အောင်...... ကြားလိုက်ရသေးတယ်......
ထားလိုက်ပါ....ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး...ကျွန်တော်ကိုယ့်လမ်းကိုဘဲ ကိုယ်ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်...။
"မငိုပါနဲ့ကွာ သေတဲ့သူက သေသွားပြီဘဲ..." ဟုပြောကာ....
ကြေကွဲစွာဖြင့်ငိုနေသော (သို့မဟုတ်) ကြေကွဲစွာဖြင့် ငိုချင်ယောင်ဆောင်နေသော....ကျွန်တော့်ချစ်သူ (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဖူးသည် ဟု ထင်ရသူ (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော့်ကို အလွန်ချစ်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော့်ကို အလွန်ချစ်ပါတယ် ဟု လိမ်ညာခဲ့သူ ....အမည်ခံအားဖြင့် "ကျွန်တော့ချစ်သူ" အား ဖြေသိမ့်သလို လို နှင့် ယောက်ကျားတစ်ယောက်က အနက်ရောင် Sticker အပြည့်ကပ်ထားသော ကားတစ်စီးပေါ်မှာ ပြော နေတဲ့အသံကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်...
မကြာခင်မှာဘဲ အဲဒီ့ကားဟာ အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး Hotel တစ်ခုထဲသို့ မောင်းဝင် သွားတာကို ကျွန်တော်....... မြင်ဖြစ်အောင်........မြင်လိုက်ပါတယ်.....။
ထားလိုက်ပါ....ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး....ကျွန်တော်ကိုယ့်လမ်းကိုဘဲ ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်...။
"ဒါဆိုလဲ သွားကြစို့ကွာ...အချိန်လည်း နှောင်းလှပြီ။ ဟိုမှာလည်း မင်းအလာကို စောင့်နေကျတဲ့သူတွေလည်း မျှော်နေလောက်ပြီ..."
"ကောင်းပြီဗျာ...ဒါဆိုလည်းသွားကျတာပေါ့...ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားကို မသွားခင် ကျွန်တော်တစ်ခု တော့ တောင်းဆိုပါရစေ...နောက်ဘ၀ကျရင် ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုအိပ်မက်မျိုး ဘယ်တော့မှပေး မမက်ပါနဲ့တော့ ဗျာ..."
"အေးပါကွာ......" ဟုသက်ပြင်းချရင်း..........."အိပ်မက်မင်း" က ကတိပေးလေသည်....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:57 PM 1 comment:
လမ်းလျှောက်လာရင်း တစ်စုံတစ်ခုဖြင့် ခလုတ်တိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်...။ ညကမှောင်နေသောကြောင့် ဘာနှင့်တိုက်မိမှန်းကို ကျွန်တော်သေသေချာချာ မမြင်ရပါ...။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ကျွန်တော်အဲဒီ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာကို ခြေထောက်နဲ့ တိုက်မိပါလျက် ခြေထောက်က မနာဘဲ...ကျွန်တော့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံ ထဲကနာလာလေသည်က တော်တော်ကို ထူးဆန်းနေသည်..။
ထိုအခါမှ ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်မိတဲ့ အရာလေးကို သေသေချာချာကြည့်မိလိုက်တယ်...။
ဘယ်ဘက်ရင်အုံကနာမှာပေါ့...ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်မိလိုက်သောအရာလေးသည်....ခဲလုံးတစ်လုံး မဟုတ်ဘဲ...ဘယ်အချိန်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကျ ပျောက်သွားမှန်း မသိသော ကျွန်တော့့် "နှလုံးသား" ဖြစ်နေသည်ကိုး.....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:20 PM No comments:
ကျွန်တော် နှင့် "ထွက်ခွာသွားသူများ"
လောကကြီး : မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ကျွန်တော် : ဒီလိုပါဘဲ....။
လောကကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဘုကြည့် ကြည့် ပြီး ကျွန်တော့်ထံမှ ထွက်ခွာသွားသည်..။
ဆရာ : မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ကျွန်တော် : ဒီလိုပါဘဲ...။
ဆရာက ကျွန်တော့်ကို မကျေနပ်သည့် အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ ကြည့်ပြီး လှည့်ထွက်သွားသည်..။
သူငယ်ချင်း : မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ?
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့ကို လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားသည်....။
ချစ်သူ : ရှင်ကျွန်မကိုဘယ်လိုမြင်လဲ?
သူကျွန်တော့ နှလုံးသားကို တံတွေးဖြင့်ထွေးကာ လမ်းခွဲသွားသည်.....။
ကျွန်တော် : မင်း ငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ထိုနေ့မှ စ၍ ကျွန်တော်သည့် ကျွန်တော့ ထံမှ ရာသက်ပန် ထွက်ခွာသွားလေသည်.....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:00 PM2comments:
တကယ်တမ်း မျှော်လင့်ကျ ကြေးဆို
တကယ်တမ်း လမ်းခွဲကျ ကြေးဆိုရင်တော့
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:21 PM2comments:
M I A Slave Of Coffee???
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:26 PM No comments:
မနေ့ညက အိပ်မက် မက်တယ်....
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:13 AM 1 comment:
ပစ်စလက်ခတ် ဖြစ်နေပါပြီ.....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:10 AM 1 comment:
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:03 AM2comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:53 AM 1 comment:
မနေ့က ငါအိပ်မက်တစ်ခု မက်တယ်ချစ်သူ...
ငါ့ အိပ်မက်နဲ့ အပြည့်ပါချစ်သူရယ်.....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:46 AM 1 comment:
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:50 PM6comments: